SONATA-CANTATA: November 2009
မေမေပြောခဲ့ဖူးတာမှန်နေမလား… လူတိုင်းမှာ ကြမ္မာဆိုတာရှိတယ်တဲ့။
ဒါမှမဟုတ် လက်ဖ်တင်နင် ဒန်ပြောခဲ့သလို ဘ၀ဆိုတာ ကြုံသလို လေနှင်ရာ လွင့်မြောနေတာပဲလား။
ဗုဒ္ဓသည် ကမ္မ၀ါဒီ ကိရိယ၀ါဒီဖြစ်သည်။ ကမ္မဿကတအမြင်သည် “မိမိတို့ပြုသော အပြုအမူအတွက် မိမိတို့တွင် တာဝန်ရှိသည်” (ဆက်စပ်ဖတ်ရှုရန် တာဝန်) ဟူသောအမြင်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် စင်ကြယ်သော ကမ္မဿကတအမြင် ဖြစ်စေရန် တာဝန်ရှောင်သော, တာဝန်မဲ့သော အမြင်များအား ငြင်းပယ်ရသည်။ ကမ္မ၀ါဒအရ
(၁) ကောင်းသော အပြုအမူ၊ မကောင်းသော အပြုအမူဟူ၍ ရှိသည်။
(၂) အကြောင်း အကျိုး ဟူ၍ရှိသည်။ ထိုကြောင့် ကောင်းမှု, မကောင်းမှုတို့သည် ကောင်းကျိုး, မကောင်းကျိုးပေးမည်။ (၃) ကောင်းမှု၊ မကောင်းမှုတို့ကို မိမိတို့ကိုယ်တိုင် ရွေးချယ်ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်သည် ဟု သိရှိနားလည်ရသည်။
အနည်းဆုံး ဤအချက်များကို လက်ခံယုံကြည်ပါမှ ကမ္မဿကတ၀ါဒီဟု ခေါ်နိုင်မည်။ အချို့သည် ကမ္မဿကတ၀ါဒီဟု မိမိကိုယ်မိမိ လက်ခံထားကြသော်လည်း လက်တွေ့တွင်မူ ဗုဒ္ဓ၏ ကမ္မ၀ါဒနှင့် ဆန့်ကျင်ဖက်အယူအဆများအား လက်ခံယုံကြည်နေတတ်ကြသည်။
နိယတိဝါဒ / ဣဿရနိမ္မိတ၀ါဒလူဘ၀သည် ရေးထားပြီးသား စာအုပ်တစ်အုပ်ကဲ့သို့ မည်သည့်အရွယ်တွင် ဘာဖြစ်၍၊ မည်သည့်အရွယ်တွင် သေမည်စသဖြင့် ဖြစ်ပျက်သမျှသည် ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားပြီးသားဖြစ်သည်ဟု ယူဆသောအမြင်အား ဒဿနတွင် Determinism ဟုခေါ်သည်။ ယင်းမူလသတ်မှတ်ချက်ကို (နိယတိ - Destiny) ဟုလည်းခေါ်သည်။ ဤကဲ့သို့ လူသားတို့၏ ကြမ္မာအား တန်ခိုးရှင် နတ်ဒေ၀တာတို့က ကြိုတင်သတ်မှတ် ဖန်ဆင်းပေးထားသည်ဟု ယူဆသောအယူဝါဒအား ဣဿရနိမ္မိတ၀ါဒဟုခေါ်သည်။ တန်ခိုးရှင်, နတ်သိကြား, အထက်ပုဂ္ဂိုလ်များ၏ စောင်မမှုကို ငံ့လင့်နေသော အယူအစွဲတို့သည် ဣဿရနိမ္မိတ၀ါဒ၏ အစွယ်အပွားများပင်ဖြစ်သည်။ ဤအယူအဆအရဆိုပါလျှင် မိမိတို့၏ ကြိုးစားအားထုတ်မှုတို့သည် အချည်းအနှီးသာ ဖြစ်ပေ တော့မည်။
ပုဗ္ဗေကတဟေတုဒိဋ္ဌိအချို့ကလည်း ဖြစ်ပျက်သမျှသည် မိမိတို့ အတိတ်ကပြုခဲ့သော ကံအတိုင်းသာ ဖြစ်ရသည်ဟုယူဆသည်။ လူ့ဘ၀အား ကံကြွေးဆပ်ရခြင်းပင် ဖြစ်၍ ဖြစ်သမျှအား ခါးဆီးခံရမည်ဟု ယူဆသည်။ ထိုသို့ ကံကြွေးဆပ်ခြင်းဖြင့် ၀ဋ်တို့ကို ကုန်စေမည်၊ သန့်စင်စေမည်ဟုလည်း ယူဆကြသည်။ အချို့သော ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များသည်ပင် ဤသို့သော အယူအဆကို လက်ခံထားကြ၏။ ဤအယူအဆသည် ဗုဒ္ဓ၏ ကမ္မ၀ါဒ စစ်စစ် မဟုတ်။ ပုဗ္ဗေကတဟေတုဒိဋ္ဌိ (ရှေးကပြုသော အကြောင်းကြောင့် ဟူသောအမြင်) ဟု ဗုဒ္ဓက သတ်မှတ်၏။ ရောဂါတစ်ခုဖြစ်လာလျှင် ကံကြောင့်ဖြစ်သော ရောဂါဝေဒနာတို့ ရှိသလို၊ သလိပ်, လေ, သည်းခြေ, ရာသီဥတု, ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုစသော အခြားအကြာင်းများစွာရှိ၍ ရောဂါရတိုင်း အတိတ်ကံကို ပုံချခြင်းသည် မှားယွင်းသော ပုဗ္ဗေကတဟေတုဒိဋ္ဌိ ဖြစ်၏။
အဟေတုက၀ါဒအချို့ကမူ လူ့ဘ၀သည် ကြိုတင်ပြဋ္ဌာန်ထားပြီးခြင်းမျိုးလည်း မဟုတ်။ အကြောင်းအရင်းမြစ်လည်းမရှိဘဲ ကြုံကြိုက် တိုက်ဆိုင်မှု (သင်္ဂတိ - Accidental occurence) များသာဖြစ်သည်ဟု ခံယူကြသည်။ လူတို့၏ ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုကြောင့် မဟုတ်ဘဲ သူ့အလိုလို သဘာဝအလျှောက် ကြုံရာကျပန်းဖြစ်ပျက် နေကြသည်ဟု မြင်သည်။ ထိုအမြင်အား အဟေတုက၀ါဒဟုခေါ်သည်။ ဤသို့အရာရာသည် အကြောင်းမဲ့ဖြစ်ပေါ်နေသည် ဟုယူဆပါက ကောင်းမှုတို့ကို ကြိုးစားအားထုတ်တော့မည် မဟုတ်သဖြင့် ကမ္မ၀ါဒ, ကိရိယ၀ါဒ၏ ဆန့်ကျင်ဖက် ဖြစ်သည်။
အကိရိယ၀ါဒကောင်းခြင်း, ဆိုးခြင်းသည်ကား ကာလဒေသပေါ်လိုက်၍ သတ်မှတ်ထားသော ပညတ်ချက်များသာဖြစ်သည်။ သူ့အမြင်တွင်မှန်သော်လည်း ကိုယ့်အမြင်တွင် မှားနေနိုင်သည်ဟု ယူဆသော ပညတ်ဂိုဏ်းသား (moral relativists) များသည်လည်း ကောင်းဆိုးဟူသော ကုသိုလ်အကုသိုလ်အား ပစ်ပယ်ရာရောက်သည်။ ထို့အတူပင် အချို့ပရမတ်သမားတို့ကလည်း အစစ်မှန်အားဖြင့် ပရမတ်တရားများသာ ရှိပြီး လူ, တိရိစ္ဆာန်ဟု မရှိဟူ၍ သမုတိသစ္စာကို ငြင်းပယ်ကာ “လူသတ်သည်ဟုမရှိ၊ အရက်သောက်သည်”မရှိဟု ယူဆကြပြန်သည်။ ကောင်းမှု၊ မကောင်းမှု ကံကို ပစ်ပယ်ရာရောက်သည်။ ဒါနပြုခြင်း, သီလ ဆောက်တည်ခြင်းတို့သည် အဓိပ္ပါယ်မရှိဟုယူဆ၍ အကိရိယ၀ါဒဟုခေါ်သည်။
ဥစ္ဆေဒ၀ါဒအချို့သောရုပ်ဝါဒီ, မျက်မှောက်ဝါဒီတို့က “လူသားသည် ရုပ်တရားများဖြင့် ဖွဲ့စည်းထား၍၊ သေလွန်သော် ပြတ်စဲ ပျက်စီးသွားမည်၊ မော်လီကျူးများ, အက်တမ်များ ပြန်ဖြစ်သွားမည်၊ မြေကြီးဖြစ်သွားသည်၊ တမလွန်လောကဟူ၍ မရှိ, အတိတ်ဘ၀ဟူ၍ မရှိ, ငရဲမရှိ, နတ်ပြည်မရှိ၊ မျက်မှောက်လူ့ဘ၀တွင်သာ ကောင်းဆိုး အကျိုးတို့ကို ခံစားရသည်” ဟုယူဆသည်။ ဤသို့ တမလွန်ကို ငြင်းပယ်သော ပြတ်စဲအယူ ဥစ္ဆေဒ၀ါဒသည် ကောင်းမှု, မကောင်းမှုကံတို့၏ အကျိုးကို ပစ်ပယ်၍ နတ္ထိက၀ါဒဟုလည်းခေါ်သည်။
ခတ္တ၀ိဇ္ဇာဝါဒအချို့သည် မိမိအတွက် အကျိုးရှိမည့်ကိစ္စဖြစ်က ဘာလုပ်လုပ်တရားသည်ဟု ယူဆကြသည်။ မိမိ၏ တန်ခိုးအာဏာ ကြီးပွားရေးအတွက် အမိ, အဖ, သားမယားသော်မှ သတ်သင့်လျှင် သတ်ရမည်၊ လမ်းကြောင်းသည် ပဓာနမကြ။ ခရီးရောက်ဖို့သာ လိုရင်းဖြစ်သည်ဟု ယူဆသည်။ ဤအယူအဆအား မဟာဗောဓိဇာတ်တွင် ခတ္တ၀ိဇ္ဇာဝါဒဟုခေါ်၍ ကမ္မ၀ါဒ၏ ဆန့်ကျင်ဖက်ဝါဒများတွင် ထည့်သွင်း၍ပြထားသည်။ ခတ္တ၀ိဇ္ဇာသည် အာဏာဝါဒ (Rule of Might), စစ်သားဝါဒ (rule of warriors) ဖြစ်သည်။ “ကြည်ညိုလေးစားမှု ခံရခြင်းထက် အကြောက်အရွံ့ ခံရခြင်းကသာ၍ စိတ်ချရသည်”ဟု ရေးသားခဲ့ဖူးသော မက္ခိယာဗယ်လီ (Machiavelli) ၏ ၀ါဒမျိုးဖြစ်သည်။ မဟာဗောဓိဇာတ်တွင် ဤ၀ါဒီမျိုးအား “မိမိကိုယ်မိမိ ပညာရှိထင်နေသော လူမိုက်များ” (ဗာလာ ပဏ္ဍိတမာနိနော) ဟု ရှုတ်ချခဲ့သည်။ လမ်းစဉ်ထက် အကျိုးရလဒ်ကိုသာ ဦးစားပေးသော ၀ါဒသည် မိမိတို့၏ အပြုအမူအပေါ် တာဝန်မယူပဲ၊ ရေတိုအကျိုးရလဒ် နောက်ကိုသာလိုက်ပြီး ဘာမဆိုလုပ်ရဲသောဝါဒ ဖြစ်၍ ကမ္မ၀ါဒ၏ ဆန့်ကျင်ဖက်အဖြစ် သတ်မှတ်ပြသည်။
ကမ္မဿကတ၀ါဒီတစ်ဦးသည် အနည်းဆုံး ကမ္မ၀ါဒ၏ ဆန့်ကျင်ဖက် အယူအဆများအား သိရှိနားလည်ထားရန် လိုပါသည်။
ဇာတက-၅၂၈၊ ပဏ္ဏာသနိပါတ်၊ မဟာဗောဓိဇာတ်
Comments ရေးသွားသူတွေ မေ့လောက်မှ ပြန်ဖြစ်တဲ့အတွက် တောင်းပန်ပါတယ်။ ဒီပို့စ်မှာ သေချာထည့် မရေးလိုက်တဲ့ “သစ္စာတရားနယ်” ကို စာဖတ်သူတွေက ဖြည့်ဖတ်သွားကြတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ။ ဘာသာစကား, ရိုးရာယဉ်ကျေးမှု စသဖြင့် လူတွေသတ်မှတ်ထားတဲ့ အမှန်တရားတွေ အများကြီးပါ။ သမုတိသစ္စာနယ်မှာ မိမိသူတစ်ပါးအကျိုး ထိခိုက်နစ်နာစေတဲ့, သူတော်ကောင်းတွေ အပြစ်တင်ဝေဖန်နိုင်တဲ့ အပြုအမူအပြောအဆိုတွေကို မကောင်းမှု အကုသိုလ်လို့ သတ်မှတ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သမုတိသစ္စာနယ်က အကောင်း-အဆိုးတိုင်းကို ကုသိုလ်-အကုသိုလ်နဲ့ ညီမျှခြင်းချလို့ မရတာတွေ အများကြီး ရှိတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ယဉ်ကျေးမှုအစဉ်အလာတွေကို ငြင်းပယ်လိုက်ယုံနဲ့တော့ အကုသိုလ် ဖြစ် မသွားပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ အရာရာဟာ သတ်မှတ်ချက်တွေပါလို့ ငြင်းပယ်လိုက်ရင်တော့ ကုသိုလ်-အကုသိုလ်ကို ငြင်းပယ်ရာ ရောက်ပါတယ်။ ကာလ, ဒေသ, ဘာသာစကား, ယဉ်ကျေးမှုတွေပေါ် မမှီပဲ ပကတိမှန်ကန်တဲ့ ပရမတ္ထတရားဆိုတာ ရှိနေလို့ပါ။ ပရမတ္ထသစ္စာနယ်မှာ လောဘ, ဒေါသ, မောဟတရားတွေ အခြေခံပြီးဖြစ်တဲ့ စိတ်စေတနာကို အကုသိုလ်လို့ သတ်မှတ်ပါတယ်။ အကယ်၍ အရင်းကြတဲ့ လောဘ, ဒေါသ, မောဟတရားတွေကို မကြည့်ပဲ၊ “ပရမတ္ထအားဖြင့် လူဆိုတာ မရှိ, အရက်ဆိုတာ မရှိ၊ ရုပ်နာမ်တရားတွေသာရှိလို့ လူသတ်ရင်လည်း လူသတ်တယ် မခေါ်နိုင်ဘူး” စသဖြင့် တလွဲကို ယူပြီး အစွန်းရောက်ရင်တော့ ကုသိုလ်-အကုသိုလ်ကို ငြင်းပယ်ရာ ရောက်ပြန်ပါတယ်။
သစ္စာတရားနယ်နဲ့ စပ်ပြီး ဆက်ပြောရရင် … လယ်တီဆရာတော်ဘုရားက ပရမတ္ထသစ္စာနယ်ကို (၁) “သဘာဝသစ္စာ” နဲ့ (၂) “အရိယသစ္စာ” လို့ ထပ်ခွဲပြပါတယ်။ လူတွေ အကောက် အယူမလွဲအောင်လို့ပါ။ ဥပမာ ပရမတ္ထနယ်မှာ သုခဝေဒနာဆိုတာ သဘာဝအားဖြင့် ရှိပါတယ်။ သို့သော်လည်း ဘုရား, ရဟန္တာစတဲ့ အရိယပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့ အမြင်မှာ သုခဝေဒနာအပါအ၀င် ဝေဒနာအားလုံး, သင်္ခါရတရားအားလုံးဟာ ဖောက်ပြန်တတ်တဲ့အတွက် ဒုက္ခလို့ ရှုမြင်ပါတယ်။ ဒုက္ခသစ္စာလို့ မြင်ပါတယ်။ သစ္စာလေးပါးဟာ အရိယသစ္စာနယ်ပါ။ ဒါကြောင့် “သစ္စာလေးပါးလွဲရင် ကျန်တာပညတ်” အစား “ပရမတ္ထသစ္စာမှလွဲရင် ကျန်တာပညတ်” ဆိုရင်တော့ ပိုပြီး တိကျပါလိမ့်မယ်။
အတုပေါ် illusion ကို ထပ်တလဲလဲ တင်ကြည့်မိတယ်…။
ကြေးမုံပြင်ထက် မှန်တဲ့ ရှေ့မှာ ခြေစုံရပ်သလို…
ခြစ်ရာတွေ အက်ကြောင်းထပ်နေတဲ့ ကမ္ဘာမြေမှာ…
(ကိုဧရာအတွက် မွေးနေ့ အမှတ်တရ)
သားကြီးက ဒီနှစ် P5 လို့ ခေါ်တဲ့ Primary5ပါ။ နောက်နှစ်ဆိုရင် P6… PSLE လို့ ခေါ်တဲ့ Primary School Leave Examination ဖြေရမှာပါ။ ဒီမှာတော့ ကျောင်းသား၊ မိဘ၊ ဆရာ အားလုံး လှုပ်လှုပ်ရွရွနဲ့ စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့ စာမေးပွဲတခုပါ။ အခု သားကြီး P5 Semester2စာမေးပွဲ ဖြေနေပါပြီ။ ဒီနေ့တော့ သူက “မေမေ သားကို မုန့်ဖိုးပိုပေးလိုက်ပါ…သားတို့ ဆရာမက စာမေးပွဲပြီးတာနဲ့ ကျောင်းမပိတ်ခင်ထိ ရတဲ့ အချိန်မှာ P6 အတွက် Algebra စသင်တော့မယ်တဲ့ သားတို့ကို Book Shop က စာအုပ်ဝယ်ခိုင်းထားတယ်” လို့ ဆိုလာပါတယ်။
ဒီမှာတင် အဖေက “သားတွေ့လား P6 က အရေးကြီးတယ်။ လာလာ သားကို အဖေ Algebra သင်ပေးမယ်..” ဆိုပြီး
“ဒီမှာ သား စာအုပ်တအုပ် ရှိတယ်။ ဗူးတဗူးလည်း ရှိတယ်။”
“ဟော စာအုပ်တအုပ် ထပ်ထည့်လိုက်မယ်”
“စာအုပ် ဘယ်နှစ်အုပ် ဖြစ်သွားသလဲ?”
သားကြီး က “နှစ်အုပ်”
“အေး တအုပ်က ‘a’, နှစ်အုပ်ဆိုတော့ ...”
“ဗူးတဗူးက ‘b’, နှစ်ဗူးဆိုတော့…”
“‘a’ နဲ့ ‘b’ နဲ့ ပေါင်းတော့” ( ‘c’ ဒါက သားငယ်က ၀င်ပြောတာပါ။ ကျမကတော့ သားငယ် အဖြေကို ရီနေရပါပြီ)
သားကြီး - “ဘယ်ပေါင်းလို့ ရမလဲ အမျိုးမှ မတူတာ။ Value ဆိုရင်တော့ ပေါင်းလို့ရတာပေါ့”
“တကယ်က သားတို့ P1ကတည်းက သင်ပြီးပါပြီ…Triangle ပုံလေးတွေ Rectangle ပုံလေးတွေနဲ့လေ…
Triangle က ဘယ်နှစ်ခု
Rectangle က ဘယ်နှစ်ခု” လို့ ဆက်ပြောပါတယ်… သားကြီးကတော့ ဘယ်အရာမဆို ခပ်ပေါ့ပေါ့ပဲ
“‘a’ နဲ့ ‘b’ ပေါင်းတာ ဟာ ‘b’ နဲ့ ‘a’ ပေါင်း တာနဲ့ တူတယ်...ဒီတော့
a +b= …”
“b + a” လို့ သားကြီးက ပြန်ဖြေပါတယ်
“a +b=b+aဆိုတာ Mathematic မှာ law လို့ခေါ်တယ်...။ Commutative Law တဲ့”
“Mother in Law ဆိုတာ ဘာတုန်း” လို့ ထမေးပါတော့တယ်။
(ဟုတ်တယ်လေ သူလည်း သူသိတာ သူဝင်ပြောရတာ)
“မေမေ့ကို မေး” ဆိုပြီး အဖေက ဆက်နေပြန်ပါတယ်။
“(a + b) + c ဟာa+ (b + c) နဲ့ ညီတယ်ဆိုတာကိုရော သားသိလား အဲ့ဒါ အရေးကြီးတယ် Associative Law လို့ ခေါ်တယ် ဒါသိပ်အရေးကြီးတယ်။”
“သိတယ်” ဆိုပြီး ပြောပြောဆိုဆို သားကြီးက အခန်းထဲက ထွက်သွားပါပြီ။
ဒီမှာ တင် ကျမက “ဘာ.. ဘာ.. (a + b) + c =a+ (b + c) ဟုတ်လား…” တွေကနဲ ခဏ စဉ်းစားပြီးမှ “အော် တူမှပေါ့ အားလုံးပေါင်းတာကိုး” လို့ ဆိုလိုက်မိတော့…
“မင်းတို့တွေ အဲ့ဒါ ခက်တာပဲ ဘာမဆို လွယ်လွယ်လေး လွယ်လွယ်လေးနဲ့၊ သူများတွေလို အသေးစိတ် သေသေချာချာ ဂဃနဏ စူးစမ်းလေ့လာချင်စိတ်မရှိဘူး။ သူများတွေက တူတယ်ဆိုရင် ဘာ့ကြောင့်တူတယ်ဆိုတာ အရေးတယူ စဉ်းစားနေတဲ့ အချိန်မှာ..” ဆိုပြီး လက်ချာက ကျမဖက်လှည့်လာပါတော့တယ်။
“အောင်မလေးတော် ကျမကလည်း လွယ်တယ်လို့ မပြောပါဘူး။ အပေါင်းမလို့ တူတာပေါ့ လို့ ပြောတာပါ။ အခြား ဟာဆိုရင်တော့ ဘယ်လာတူနိုင်ပါ့မလဲ” လို့ နှုတ်လန်ထိုးလိုက်တော့မှ
“အင်း” ဆိုပြီး ဆရာကြီး ကွန်ပြူတာဖက် မျက်နှာလှည့်ပြီး အသံတိတ်သွားတော့တယ်။
ဒီကနေ့ သင်ခန်းစာ ဒီမှာတင်ပြီးပါပြီ။ ။
စကားချပ်။ ။ ကျမတို့ လင်မယားကတော့လေ … ဆရာ ဓနုဖြူဆွေမင်းရဲ့ “ဆြာတွတ်နဲ့ မသေးမျှင်” အတိုင်းပါပဲ။
မသီတာ သီချင်းမညည်းတော့တာကြာပေါ့…။ အရင်းစစ်တော့ အမြစ် ကိုဧရာက ဆိုသလို… တံတျာတေးရှင် အဲ့လူကြီးကို မနာလိုတာက စ,တာပါ …။ ရွှေမန္တလေး မျိုးဆက် လို့ မပြောရဘူး… ဘယ်သီချင်းပဲ ကောက်ညည်း ညည်း … ဘယ် အချိန်ချိန် ထ ဆိုဆို… ဘယ်တော့မှ ဖြစ်ကတတ်ဆန်း မဆို…။ မူလ အဆိုရှင် အသံကို မမှီ မှီအောင် တု ဆိုနေတာကြီးက အမြင်ကတ်စရာကောင်းလွန်းလို့ …။ သူ့လို အဖြစ်မရှိတဲ့ ဒီက ဆိုကို မဆိုတော့တာ … မှတ်ကရော။ မရှိ မာန မတတ်မာန ပေါ့သေးသေးမှတ်လို့။ တခါတလေ အမှတ်တမဲ့ ဆိုလိုက်မိရင်လည်း သူ့ဘက်တော်သားနှစ်ယောက်က ဟား ဟား မေမေကြီး အသံကြီး ကလည်း ဟား ဟား ဟား နဲ့ ကောင်းချီးပေးကြလို့ ဘလော့ဂ်မှာပဲ တခါတလေ ဆိုရတော့တယ်။
မသီတာ ဆယ်ကျော်သက်တုန်းကတော့ “ဓားသွားထက် ပျားရည်စက်လို ခုံမင်နေတယ်.. အချစ်ရဆုံး.. ကိုယ်ရဲ့ သီချင်းလေး မင်း…” ဆိုတဲ့ သီချင်းကို ကော်နီစတိုင် မတူ တူအောင် ဖမ်းဆိုရတာ အမော။ Echo သံလေးပါအောင် ရေချိုးခန်းထဲ အလုံပိတ် အော်တာပေါ့။
ကျောင်းတွေ ပိတ်ထားတဲ့ အချိန်.. ခဏခဏ နားထောင်ပြီး ဆိုညည်းမိတဲ့ သီချင်းလေးက စိုင်းထီးဆိုင်ရဲ့ လှေငယ်ရှင် ဆုတောင်း တဲ့ နားဆင်ကြည့်ကြပါရှင်…
(လှေငယ်ရှင် ဆုတောင်း…. လှေငယ်ရှင် ဆုတောင်း….)
(လှေငယ်ရှင် ဆုတောင်း… )
ရေလယ်မှာ ကမ်းကပ်ဖို့ မမြင်နိုင်သေးတယ် … (လှေငယ်ရှင်အဖော်မဲ့ ….)
ရေလယ်မှာ လွင့်မျောကာ လှိုင်းရဲ့ဒဏ်တွေရဲ့ကြားမှာ
အဖန်ဖန် မှောက်ရင်းလှန်ရင်းနဲ့ ရောက်ရာလှော်ခတ်လို့….
ဘယ်ဆီသောင်ကမ်းမှာ မှေးစက်ရမယ်မျှော်လင့်ကာ… (လှေငယ်ရှင်အဖော်မဲ့ …. လှေငယ်ရှင်အဖော်မဲ့ ….)
လေငြိမ်နေတုန်းမှာ ကမ်းမကပ်ခဲ့တဲ့ ငမိုက်သားရယ်… (လှေငယ်ရှင်ကမ်းအဝေး)
တခါကြုံဖူးတဲ့ အခွင့်အခါကောင်းတစ်ခုကို နှစ်ခါရဖို့မလွယ်
ဆယ်သူရှိတုန်းမှာ လက်မလှမ်းတော့… ကယ်သူဝေးပြီ… (လှေငယ်ရှင်ကမ်းအဝေး… လှေငယ်ရှင်ကမ်းအဝေး…)
ကိုယ်တခါ အားထားတဲ့ ပဲ့ကလေးရယ် ပျောက်ဆုံးပြီကွယ်
အဖော်မွန်ဖြစ်တဲ့ အို မီးခွက်လည်း ငြိမ်းခဲ့ပြီကွယ်…
ဒီအမှောင်ထုထဲမှာ စမ်းတ၀ါးနဲ့ မနေလိုတော့ပြီ… (ဒီအမှောင်မှာစမ်းတ၀ါး…)
ပြန်နိုင်ဖို့ လမ်း မမြင်တဲ့ဘ၀ကြမ်းမှာ မကူးခတ်ချင်
တည်ငြိမ်တဲ့ မေတ္တာ ကမ်းစပ်မှာ ခိုလှုံပါရစေ… (လှေငယ်ရှင် ဆုတောင်း…. လှေငယ်ရှင် ဆုတောင်း….)
အခု နောက်ဆုံးတပုဒ်အနေနဲ့ ကိုခိုင်ထူးရဲ့
ပြုံးပျော်ချင်ရင် ၀မ်းနည်း တတ်ရမယ်… ပြည့်စုံချင်ရင် ဆင်းရဲတတ်ရမယ်
ဒါဟာ .. လောကရဲ့ သစ္စာတရား
လိမ္မာတတ်အောင် မိုက်မဲဖူးရမယ် … ချစ်ခင်တတ်အောင် မုန်းမေ့ဖူးရမယ်
မပြေလည်တွေ မမျှတတွေကြား … ဖျောက်ပစ်ချင်တာဟာ ဘ၀တခုပါ
ဟေ့ .. သစ္စာဆိုတာ အမှန်တရားပါ
လောကရဲ့ အလယ် သစ္စာရှိဖို့ တိုက်တွန်းရအောင်
တို့ တို့ တို့ တို့လာတယ်)))
မဆိုဘူး မဆိုဘူးနဲ့ စင်ပေါ်ရောက်သွားတာ … ခွင့်လွှတ်တော့ တန်ခူးရေ